Ukukhuphuka kwamazinga okushisa kuzonciphisa ukusebenza kwezindiza | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma ngabe esikhathini esedlule ku blog Besikhuluma ngokuthi, ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke, ukuhamba ngendiza kungaba nesiyaluyalu esikhulu kunokujwayelekile, ucwaningo olusha olushicilelwe ephephabhukwini iClimatic Change lwembula ukuthi emashumini eminyaka ezayo kuzoba nzima kakhulu ukusuka.
Futhi kungukuthi, uma ufuna ukukwenza, kuzofanele ngihambe nesisindo esincane; ngaphandle kwalokho indiza kuzofanele ibambezeleke noma ikhanselwe. Kungani?
Njengoba umoya ufudumala, uyasakazeka futhi ubukhulu bawo buyancipha. Ngenxa yokuthi ilula, amaphiko akhuphi ukuphakama okuncane lapho indiza igijima komgwaqo. Ngakho-ke, ngokuya ngaphezu kwakho konke kumodeli yendiza nobude bomgwaqo uqobo, phakathi kuka-10 no-30% wezindiza ezilayishiwe ngeke zikwazi ukusuka uma izinga lokushisa liphezulu kakhulu.
Umbhali ohola phambili ocwaningweni u-Ethan Coffel, Ph.D. wase-University of California, uthe, "Imiphumela yethu iphakamisa ukuthi ukuvinjelwa kwesisindo kungabeka izindleko ezingasho lutho ezindizeni kanye nomthelela ekusebenzeni kwezindiza emhlabeni wonke ".
Izinga lokushisa lomhlaba jikelele lingakhuphukela ku- 3 degrees Celsius ngonyaka ka-2100, Kepha, amagagasi okushisa azoba njalo, ngamazinga okushisa aphezulu angu-4 kuya ku-8 degrees ephakeme kunokujwayelekile kusukela ngonyaka ka-2080. La magagasi okushisa yilawa azodala izinkinga ezinkulu emhlabeni oqhubeka uxhuma.
Ngakho-ke, uma ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kungancishiswa, amandla kaphethiloli nezisindo zokulayisha kuzodingeka zehliswe kuze kufike ku-4% ezinsukwini ezishisa kakhulu kwezinye izindiza. Uma kwenzeka zehliswa zaba sezingeni eliphansi, futhi kungekudala, kuzodingeka kuphela ukunciphisa isisindo ngo-0,5%, ngokusho kocwaningo.
Ukuze wazi okwengeziwe, unga Chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukukhuphuka kwamazinga okushisa kuzonciphisa ukusebenza kwezindiza